तरुण दलमा अध्यक्ष र महासचिवको दोहोरी
जनतापाटी डेस्क बिहिवार, भदौ २६, २०७६, ०३:२४:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । जम्मा ४ जना मात्र पदाधिकारी रहेको नेपाल तरुण दलको विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।
अध्यक्ष जीत जंग बस्नेत र महासचिव भुपेन्द्रजंग शाहीको विवादका कारण एउटै तरुण दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो देखिएको छ । ६०–४० को भागवण्डामा रोकिएको कांग्रेको विवाद सर्लक्कै तरुण दलमा सरेका प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
देउवा गुटका तर्फबाट दलमा रहेका बस्नेत र पौडेल गुटबाट स्थान पाएका शाहीको तानातानले हाल तरुण दललाई संकटको घेरमा बन्दि बनाएको छ ।
अध्यक्ष बस्नेतले महासचिव शाहीसँग समन्वय नै नगरी जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई परिपत्र गरेपछि चर्किएको विवाद पछिल्लो समय उत्कर्षमा पुगेको हो ।
त्यसपछि कांग्रेसको जागरण अभियानको विरोधमा रहेका महासचिव भुपेन्द्र जंग शाहीले दुई छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर विभिन्न निर्णय गरेका थिए । पहिलो विज्ञप्तिमा महासचिवले सिन्धुपाल्चोकमा कारवाहीमा परेका जिल्ला कार्य समितिका उपाध्यक्ष सगुन श्रेष्ठलाई कारवाही फुकुवा गरिएको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
त्यस्तै दोस्रो विज्ञप्तिमा उनले सप्तरीमा ३ वर्षबट रिक्त रहेको जिल्ला अध्यक्षको पदमा आफूनिकट सितादेवी यादवलाई अधिवेसन गराउनका लागि नियुक्त गराएका व्यहोरा व्यक्त गरेका थिए ।
तर यो निर्णयको विरुद्धमा तरुण दलका अध्यक्षले आज(बधबार) विहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रष्ट पारेका छन् । उनले महासचिव शाहीले गरेका दुवै निणर्य लोकतान्त्रिक परम्पराको विरुद्ध हुने भन्दै दुवै निर्णयलाई रोक लगाए । यसपछि झनै आक्रोसका माहोल तरुण दलमा पैदा भएको छ ।
अध्यक्षको नियर्णयबारे पुनः विचार गर्दै दलका महासचिव शाहीले बुधबार दिउँसो पुन विज्ञप्ति जारी गरे । शाहीले आफूले पहिले गरेका निर्णय सही भएको र अबदेखी दलको निर्णय गर्न अध्यक्षको कुनैपनि भुमिका नहुने व्यहोरा विज्ञप्तिमा राखिएको छ ।
यस विषयलाई लिएर तरुण दलका अध्यक्षको कुनै प्रतिक्रया बाहिर आएको छैन् ।
यी देश, जहाँ महिनावारीका बेला महिलालाई विदा दिइन्छ ! आइतवार, जेठ १२, २०७६, ०९:२७:००
सरकारले राम्रो काम गरेको भ्रममा प्रधानमन्त्री ! केही समय पहिले आफ्नै सचिवालय र स्थायी कमिटी सदस्यले गरेका टिप्पणीप्रति कटाक्ष गर्दैै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका राम्रो कामको प्रशंसा गर्न नसक्ने कोही–कोही कवि बनेका छन् भनेका थिए । बुधवार, माघ १, २०७६, १३:५३:००
निजगढ विमानस्थललाई लिएर ट्वीटरमा विज्ञको दोहोरी शर्मालाई सायद हिजो कट्टर मानवअधिकारवादी रहेका प्याकुरेलको कुरा मन परेन । प्याकुरेलले समेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुरा उठाएका छन् । मंगलवार, पुष ८, २०७६, १२:३५:००